Miss Scum Slayer Reborn - Mamakia Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics amin'ny Internet
Miss Scum Slayer Reborn Average 3.2 / 5 avy amin'ny 12
Vakiana ianao Miss Scum Slayer Reborn, mahafinaritra manhwa.
Valifaty FL ratsy hafa indray amin'ny scums sy bitch! Nandry tamin'ny filoha aza izy fa te ho bevohoka! Ny filoha anefa tsy olona azo adala! Inona no hataony rehefa azony ny FL-ntsika? Hanome “sazy” tsara ho azy ve izy?
Nofitahin'ny olon-tiany sy namany akaiky indrindra i Yun Weinuan tamin'ny fiainany farany. Araka ny fandehan'ny tantara rehetra dia nahazo fiainana hafa izy ary nianiana hamaly faty izay nanao ratsy taminy. Saingy tsy hiverina intsony ny zanany amin'ny fiainana farany. Ka dia nipoitra hevitra izy, dia ny hitady lehilahy tsara tarehy, hiara-matory aminy, ary bevohoka. Mazava ho azy fa tsy nampoiziny fa ho tezitra mafy ity lehilahy ity rehefa nandositra…
Chapter 20	Novambra 14, 2021
Chapter 19	Novambra 15, 2021
Chapter 18	Novambra 15, 2021
Chapter 17	Novambra 15, 2021
Mpiara-miasa amin'ny Girl Girl
Tonga renin'ilay olon-dratsy aho